Bangiga Adduunka oo sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu kor u kacay - Halbeeg News
MUQDISHO(HALBEEG) Warbixin uu soo saaray bangiga Adduunka ayaa lagu sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu kordhay intii u dhaxeysay sannadihii 2013-ka ilaa 2017-ka.
Bangiga Adduunka ayaa sheegay in dhaqaalaha sannadlaha laga dareemayo koror dhan 2.5%, iyadoo la sheegay in arintan ay kaalin ka qaadaneyso lacagaha taleefoonnada laga iskaga diro, oo aad looga isticmaallo dalka.
Bangiga Adduunka ayaa sheegay in canshuurihii dowladda u soo xarooday ay sare u kaceen, kuwaasoo sannadkii 2016-ki ahaa $113 million balse sannadkii 2017-kii noqday $143 million, halka bilihii ugu horreeyay ee sannadkan 2018-kana ay noqdeen $42 million.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in adeegga lacagaha taleefannada la isugu diro, oo ka mid ah ganacsiyada ugu waaweyn Soomaaliya, la horumariyo.
1.In shacabka isticmaala loo abuuro waxyaabo lagu sugayo ammaanka adeegaas isla markaana la xaqiijiyo sida la isugu halleyn karo.
2. In la hir galiyo hannaan horumar u sii horseedi kara adeeggaas, sii ballaarintiisa, maareynta halista iyo in la yareeyo fursadaha ay heli karaan dadka sida been abuurka ah wakiillada uga noqda ama waxyeello kasta oo ka dhalan kartaba.
3. In la ilaaliyo macluumaadka shacabka isticmaala adeegga iyo iney si sahlan u adeegsan karaan.
4. In la xoojiyo ka war qabidda hab sami u socdkiisa iyo cabashada dadweynaha, si looga hor tago hakad ku yimaada adeegga taleefanka, wax kasta oo sabab u noqdaba
Madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka oo markale maxkamad la soo taagay